I-V-band clamp zenziwe nge-fasteners yentsimbi, amandla okuxhathisa ubugqi.Le ndlela isetyenzisiweyo isetyenziswa ikakhulu nge-flanges, i-flanges ezinobukhulu obahlukeneyo azinakho ukusebenzisa i-groove efanayo, okanye ukuvuza kuya kwenzeka, ngoko ke uphando kufuneka lubonelele ngemizobo ye-flange okanye ye-groove.
Isetyenziselwa ukudibanisa ukuphuma kwe-turbocharger kunye nombhobho wokuphelisa iimoto. Inokuthintela i-supercharger ukuba ingabinamandla kwaye intshukumo yonakale kwaye uxinzelelo lwe-supercharger.
I-T-bolt ene-clamp yasentwasahlobo yongeza imithombo kwi-T-bolt clamp eqhelekileyo ukulungiselela ukuhluka kobukhulu obuhlangeneyo, ukubonelela ngoxinzelelo lwetywina elifanayo kunye nokusebenza okuqinisekileyo kwetywina.
I-T-bolt clamp luhlobo lwe-clamp esetyenzisiweyo ekutywineni kwe-silicone itywina lokutywina. I-bandwidth yangoku esinayo yile: 19, 20, 26, 32, 38.
I-robust clamp ene-trunnion eqinileyo
I-robust clamp ene-trunnion eqinileyo sisiseko esisebenzayo ukunkcenkceshela.
Ukubambelela ngokuqinileyo ngamabhloko aphindwe kabini
Isibambiso esomeleleyo esineebhalthi eziphindwe kabini sinee-screw ezimbini, ezinokusetyenziselwa ukubuyisela umva njengebholithi okanye i-bol-co-directional bolts.